Nagarik Shukrabar - इशाको बोल्ड अवतार
सोमबार, ११ असार २०७५, ०७ : ३२
इशाको बोल्ड अवतार
आइतबार, ०१ साउन २०७४, ०२ : ४७ | शुक्रवार , Kathmandu
इशा गुप्ताको अभिनय आफ्नो ठाउँमा छ तर उनको अभिनयभन्दा पनि उनको बोल्ड फिगरले जतततै प्राथमिकता पाउँछ । आखिर उनी देखिन्छिन् पनि उत्तिकै कामुक । लामो समयदेखि फिल्मी पर्दामा नदेखिएकी उनी केही समयमै अजय देवगन र इमरान हासमीसँगै ‘बादशाहो’मा आउँदैछिन् । फिल्मका ट्रेलर र केही गीत आइसकेका छन् । ट्रेलरमा उनी सनसनीपूर्ण अवतारमा देखिएकी छन् । अझ ट्रेलरलाई नै मात खुवाउने गरी उनले इन्स्टाग्राममा बोल्ड अवतारको भिडियो प्रस्तुत गरेकी छन् । भिडियोको सुरुवातमा उनी बिकिनीमा देखिए पनि मध्यान्तरतिर उनलाई अर्धनग्न अवस्थामा देख्न सकिन्छ । ‘कमिङ सुन’ मात्र लेखेर इन्स्टाग्राममा पोस्टेकी उनको यो भिडियो आगामी फिल्म हो वा कुनै कमर्सियल भिडियो त्यो त समयले नै बताउला ।
फेरि सिक्वेलको गफ
फिल्मकी निर्मातामध्येकी एक ऋचा शर्माले प्रिमियर सोमा फिल्मको सिक्वेल बन्ने घोषणा गरेकी थिइन् । संयोग के छ भने यो फिल्म पनि शुक्रबार, शनिबार ठीकै चले पनि आइतबारबाट चलेको छैन । अनि फ्लप भएको ‘मुखौटा’को सिक्वेल नबनेको इतिहास साक्षी हुँदाहुँदै ‘सुनकेसरी’को सिक्वेल बन्ने कुरा गफ मात्र हैन भनेर कसरी बुझ्ने ?
अरुका फिल्म नगर्ने ?
आखिर अरु निर्माताका फिल्म नै नगर्ने हो भने श्वेताले औपचारिक रुपमै घोषणा गरे भयो नि, म आफूले बनाएका फिल्ममा भन्दा बाहिर अभिनय गर्दिनँ । निर्मातालाई पनि सजिलो, तपाईंलाई पनि सजिलो हैन र ?
उँधो गति उँधै मति
अनमाेल केसीकाे एकाितर फिल्म नचलेर इज्जत दाउमा छ, त्यसमाथि एकसाथ दुई फिल्म । यसैलाई भनिन्छ, उँधै गति उँधै मति ।